ပန်းအိက အင်းယားကို သွားရအောင်ဆိုလို.သာ တူတူထွက်လာခဲ့တာ မြတ်ခေါင်းထဲမှာ အခုထိ သူမဘာကိုဆိုလိုနေမှန်း မသိသေး။
ကန်ဘောင်မှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမဟုတ်တော့ လူတွေသိပ်မစည်။ A21ဆပ်ပြာကြောငြာထားသော ခုံတစ်ခုမှာ ပန်းအိဝင်ထိုင်ပြီး၊ သူမကိုလဲ လာထိုင်ဖို. လက်ယပ်ခေါ်သည်။
“မြတ် .. နင်မှတ်မိလား… ငါတို.၂ယောက် ဒီနေရာမှာ စတွေ.ခဲ့တာ…”
သူမခေါင်းထဲမှာ ဘာကိုမှ မမှတ်မိပါ.. ဒါကြောင့် ပန်းအိကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သူမပြောမယ့်စကားတွေကို ထိုင်နားထောင်နေမိသည်။
“အဲဒီနေ့က နင်က ဒီရေပြင်ကိုကြည့်ပြီး ငိုနေခဲ့တာ။ ငါက နင်ဘာလို.ငိုနေလဲမေးတော့ နင်ကငါ့ကို ရန်သူလိုကြည့်ပြီး ဘုတောတော့တာဘဲ..” ပန်းအိက မြတ်အရှေ. မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း “ငါက နင့်ကို လောကကြီးမှာ နင့်ထက်ကံဆိုးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လို.ပြောတော့”
“မိဘ၂ပါးမျက်စိရှေ.မှာ လက်တလောဆုံးသွားတဲ့ ငါ့ထက်ကံဆိုးလားလို. နင်ပြန်မေးတယ်လေ..” ပန်းအိစကားကို ဖြတ်ပြီး မြတ်ဝင်ပြောမိသည်။
“အေး.. ဟုတ်တယ် မြတ်.. အဲဒီမှာ နင်နဲ့ ငါ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်ပြီး ငိုကြွေးခဲ့ကြတာ..”
“ငါတို.၂ယောက် အဲဒီအတိတ်ဆိုးတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မပြောကြေးလို.လဲ ကတိပေးခဲ့ကြတယ်..”
ပန်းအိက သူမပြောတဲ့စကားတွေက အမှန်ပါလို.ထောက်ခံသလိုအပြုံးနဲ့ ကြည့်နေခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ်.. သူမနဲ့ ပန်းအိ ဒီကန်ဘောင်ပေါ်မှာ တွေ.ခဲ့ကြတယ်..
အမုန်းတွေ နားကျဉ်းမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့နေ့.
တစ်သက်စာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရွံရှာမုန်းတီးခဲ့ရတဲ့နေ.
အဲဒီနေ့က ပန်းအိနဲ့သာမတွေ.ရင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို.ထိ ကြံရွယ်ခဲ့တာ…
သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို အလိုမတူဘဲ သိမ်းပိုက်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကြောင့်
Posted by Tommy Girl at 7:33 AM4comments:
”‘ဟဲ့ ဘယ်သွားမလို.လဲ..” မနက် အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း ရေမိုးချိုးပြီး အပြင်ထွက်မယ်အလုပ်..
“ပလုတ်တုတ်.. လန့်တာ…” မြတ် တကယ်လန့်ပြီး ထအော်မိခြင်းပါ…. “ဘာလဲဟာ..”
“ငါ နင့်နောက်က ထပ်ချပ်မကွာ ရှိနေမယ်လို. ပြောထားတယ်လေ..” ကောင်မလေးကပြောသည်။
“ဟာ.. ငါ မနက်စာထွက်စားမလို.လေ… နင်ကဘာလိုက်လုပ်မှာလဲ..”
“ငါလဲ ဗိုက်ဆာတယ်.. ငါ့ကိုလဲကျွေး..”
“နင်က သရဲလေ.. ဘယ်လိုလုပ်စားမှာလဲ..”
“ဒုက္ခဘဲ.. ငါက သရဲကို ဘယ်လိုကျွေးရမှာလဲဟ…”
“နင် စားစရာမှာရင် ငါ့အတွက် သတ်သတ်မှာပေးပြီး၊ စားဖို.သောက်ဖို. ဇွန်း ခက်ရင်း စီစဉ်ပေး၊ ဒါဆို ငါစားလို.ရပြီ”
“အင်း.. ဒါဆိုလဲ ပြီးရော..”
သူမတို.၂ယောက် သဘောတူညီချက်ယူပြီး၊ အိမ်ပြန်သို. တူတူထွက်လာခဲ့ကြသည်။
ဒီနေ့တော့ လောကကြီးက အလွန်သာသာယာယာရှိနေသည်။ မနေ့ညက ရွာထားတဲ့ မိုးရေစက်တွေလဲ နေမင်းရဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် ခြောက်သွေ.ကုန်ပြီထင်သည်။ အရာရာက ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို သူ.နေရာနှင့်သူ သေသေသပ်သပ် အစီအစဉ်တကျရှိနေခဲ့သည်။
“ဒါနဲ့…” သူမ ဘေးမှလိုက်ပါလာသော ကောင်မလေးကို တချက်ငဲ့ကြည့်ရင်း … “နင်က သရဲဆိုတော့ အရည်ပျော်မသွားဘူးလား..”
ကောင်မလေးက မြတ်ပြောသော စကားကို နားမလည်သလိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း.. “ဘာကိုပြောတာလဲ..”
“ဟိုလေ.. ငါသိတာက သရဲတွေက အလင်းရောင်ကြောက်တယ်လေ.. အမှောင်ထဲမှာဘဲ..”
ကောင်မလေးက ပြောလက်စ စကားကို လက်ကာပြရင်း.. “နင်ပြောတာ ငါသိပြီ၊ ငါက သရဲအစစ်မဟုတ်သေးဘူးလေ၊ ငါဘယ်လိုသေလဲ မေ့နေတဲ့သူဆိုတော့ ၀ိဥာဉ်ဘ၀နဲ့တင် ရပ်ပြီး ဘ၀ကူးမရဖြစ်နေတာ၊ ဒီတော့ သာမန်သရဲတွေလို အလင်းကြောက်တာဘာညာ မရှိသေးဘူး..”
“သြော်.. သြော်…” ကောင်မလေးပြောသမျှကို ခေါင်းငြိမ့်ရင်း၊ လမ်းထိပ်အကျော်နားမှာတွေ.သော မနက်စာဆိုင်လေးတွင် ခြေလှမ်းများကို ရပ်တန်.လိုက်သည်။ “ဒီမှာ စားကြမယ်..”
ကောင်မလေးက ဆိုင်းဘုတ်ကို တစ်ချက်မော့ဖတ်ရင်း.. “အင်း.. နင်စားနေကျဆိုင်ဘဲ..”
“သြော်.. ငါ နင့်အကြောင်းတွေကို သိနေပါတယ်ဆို..”
မြတ် ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘဲ ဆိုင်တံခါးကို တွန်းဖွင့် ၀င်လာခဲ့သည်။
Posted by Tommy Girl at 7:31 AM 1 comment:
Posted by Tommy Girl at 7:26 AM No comments: